News Collection: निशा अब कार्यकारी प्रमुख ?
निशा अब कार्यकारी प्रमुख ?
मोडलिङ क्षेत्रबाट उदाएकी नायिका निशा अधिकारीलाई सम्भावना बोकेकी नायिकाको रुपमा लिइन्छ । मोडलिङ गर्दा राम्रो पारिश्रमिक लिने निशाले चलचित्रमा पनि मोटै रकमको माग गर्छिन् पढेलेखेकी नायिकाको रुपमा गनिने निशाको रजतपटकको शुरुवात त्यति सुखद् भने रहेन । उनी अभिनित चलचित्र ‘मिशन पैसा र नैना रेशम’ले खासै व्यापार गर्न सकेन भने ‘फस्ट लभ’को सफलताको जस उनले पाइनन् ।
नायक आर्यन सिग्देल र निर्देशक सिमोस सुनवारले सफलताको स्वाद लिएकाले उनी हिस्सै हुनुपर्‍यो । यतिबेला उनको हातमा कुनै चलचित्र त छैन तर पनि उनको व्यस्तता भने हेर्न लायकको छ । उनको व्यस्तता बढ्नुको कारण भने भर्खरै खोलिएको टिभी च्यानल ‘टिभी फिल्मी’ हो । उनी यो च्यानलकी कार्यकारी प्रमुख हुन् ।
उनलाई यो पदमा पुर्‍याउने श्रेय भने निर्देशक प्रेमी निरक पौडेललाई जान्छ । गोपीकृष्ण हलका मालिक तथा निर्माता उद्धव पौडेलका छोरा निरक उनै हुन् जसको पहिलो निर्देशित चलचित्र कुसुमे रुमालले बजारमा पानीसमेत पाउन सकेको थिएन । तर पनि उनले आफ्नी प्रेमिका निशालाई भने बाबुले खोलेको च्यानलमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने दिलाएरै छाडे, जसका कारण निशाको व्यस्तता दिनँहु बढ्दो छ ।